Amagama Aya Kukukwenza Unqabile
Kubafundi nabazali Umsebenzi wesikolo wasekhaya
Uyakhumbula indlela okonwabile ngayo xa ufunde ukuthetha supercalifragilisticexpialido ? Ngaba awuzange uzive uhlakaniphile? Ngenxa yokuba ukhulile, akuthethi ukuba ama-acronyms kunye ne-emojis kufuneka ibe yindlela yoqhagamshelwano oluphambili. Emva koko, ukuba ufuna ukuphumelela ebomini, kufuneka wenze umfanekiso ongenakulibaleka.
Kutheni kubalulekile ukuba amagama akhethiweyo
Ukuba nesigama esisigxina kukuvumela ukuba uxoxe ngendlela eqiqayo nengqiqo.
Ingaba uzama ukuhlawulela umsebenzi, chukumisa umfundisi wakho wesi-3, okanye ukhonkwane kwi-interview ye-scholarship, ukuba ukwazi ukukhetha amagama akho ngokucokisekileyo kunokukunceda ukuba ume. Kodwa nantsi into ekumele uyiqwalasele: ukusetyenziswa kweelwimi ezinzima kunokubangela ukuba abantu bavaliwe, ngoko kulungele ukuvavanya amagama ambalwa amatsha ngexesha kwaye ubone uhlobo oluthile lokuphendula.
Kungenzeka ukuba, ubonile (okanye mhlawumbi kusetyenziswe) ambalwa ala magama. Kwaye ngelixa kunamakhulu amabinzana anokukwenza ube nengqiqo, ezinye ziyamnandi (kwaye zilula) kunokuba abanye basebenzise. Ngoko, ngokuzayo xa unesiqwenga-to-toe kunye nomfundisi we-AP yakho yesiNgesi, udibanise isenzo esifanelekileyo kwaye ummangele ngezinye ezimbalwa zala magama anqabileyo.
I-Accolade: uphawu lokuvuma; uzuko. Nangona wathola ama-accolades amaninzi ebusuku ebusuku, uBen usengomnye wabantu abathobekileyo.
I-Acquiesce: ukuhamba kunye nento ngaphandle kokuqhankqalaza, nokuba awufuni ngokwenene.
Umkhulu wam uthanda i-ballet kwaye wathenga ithikithi ukuba sihambe. Ndifuna ngokwenene ukubukela umdlalo we basketball, kodwa ukumncoma kwakhe okumnandi kwandibangela ukuba ndifumane.
I-Bamboozle: ukufihla iinjongo zeenyaniso; ukukopela okanye ukukhohlisa omnye umntu. Ndandiqhaqhazela ngumhlobo wam ukuba ndithenge iinqwelo ezintsha zeenyawo nangona umama wakhe athatha iindidi.
Camaraderi e : kuthemba okukhoyo phakathi kwabahlobo abachitha ixesha kunye; umoya wokwazi. Kwakukho uluvo lwekhampani phakathi kweqela lebhola emva kokuba bachitha iiveki ezimbini ndawonye kwinkampu yentlango.
I-Conundrum: ingxaki enzima. Kukhangeleka ukuba unayo i-conundrum encinane, kodwa yinto eyenzekayo xa ukopela uvavanyo kwaye utitshala uyayifumana.
Idyllic: uxolo, uvuyayo , uyonwabile. Igumbi lokufundela ngaphandle esikolweni lethu kwindawo engabonakaliyo kuba unokubona intaba yeentaba kunye namahektare amaninzi ehlathi kwiifestile ezivulekileyo.
Ukungaqiniseki: engenasiphelo okanye engenasiphene; akakwazi ukwenza okubi. Ngaba uke wafumana lo titshala omnye ongayi kwamkela nawuphi na umsebenzi ngaphandle kokuba ungenakulungile? Ayikho indlela yam iincwadana eziza kuzaliseka.
I-Perfunctory: into eyenziwe ngaphandle kokunyamekela okanye ingqalelo. Uyenze umsebenzi wempembelelo kuquka amagama achazayo kule ncoko. Ngexesha elilandelayo, ndikulindele ukuba ubonise umdla ngakumbi kulokho ubhalayo.
Vula: ucinge ngento ethile kwaye ngokubanzi. Abantu abajamelana nokuxhalaba bavame ukukhanya kunye nokulungelelanisa iingcamango zabo.
Isiqhamo: ezichongiweyo ngeemeko eziqhubisayo. Ulwalamano lwam omdala omdala kunye nomama wethu lubangele ukukhulumisana kakhulu phakathi kwabo babini.
I-tenuous: ibuthakathaka kakhulu okanye incinci kwaye inokutshintsha . Asiqinisekanga ukuba ivenkile yethu yokubhukuda iya kusinda kule nkathi ebusika ebusika. Ingqesho yakho iya kuhlala ihlala ingqongqo kude kube yilapho sazi inani leentengiso ezivela kule nyanga.
Gcoba: ukubuyela ngaphaya naphakathi kwamaphuzu amabini, ukuxubha phakathi kweembono ezahlukeneyo, okanye ukungazinzi. Xa ndibuza udadewethu apho aya khona ekolishi, uyazikhupha phakathi kwezikolo zakhe ezizithandayo; kodwa ndiyazi ukuba ekugqibeleni uya kwenza isigqibo esiphezulu kuye.
I-Vitriolic: enobuqili okanye obunzima ngetoni. Unyulo lomzimba lwabafundi luba yimpikiswano efikelela kumazinga e-vitriolic. Abaviwa ababini baphetha iintetho zabo ngokumemeza amagama angcolileyo.
I-Wheelhouse : isalathiso somntu ngamnye wenduduzo okanye ubuchule. Ndikufuna ukuba ugqithele eli bali malunga nokwakhiwa kwesikolo sethu, nangona kungekho kwiphepha lokuhlala.
Unomdla: ukubonisa okanye ukuva inkxaso enamandla yomntu, isizathu, njl njl. Ummelwane wam ube ngumsekeli onyantsekiliso yamalungelo esilwanyana ngokude ndiyamazi.
** Umthombo oyintloko weenkcazelo: https://www.merriam-webster.com
Isikhokelo sokuQala kokuQala kwi-Bullet Journaling
UHarvey M. Robinson
Imbali yeSliced ​​Bread
I-Torvald Helmer's Monologue ephuma kwi 'House Doll'
Ukudibanana noMninkulu wama-Chamuel, isithunywa sobudlelwane obuXolo